Hlanganyeka - IZINDLELA ZOKUPHILA
I-Wetlands of Distinction Initiative ikhula futhi sidinga usizo lwakho ukwenza kube yimpumelelo. Kunezindlela eziningana zokuzibandakanya:
I-1. Thumela ama-Wetlands akho wokuHlanganisa Isicelo
Chofoza lapha ukuze uqalise.
I-2. Bhalisa ukuze ube umbuyekezi wesifunda sakho.
Qaphela amalungu e-SWS! Sifuna amalungu avela kuzo zonke izahluko ukusiza ngeziNdawo zethu eziManzi zokuHlanganisa, ukuze asisize sifinyelele imithombo yamanzi ehlongozwayo njengamaxhaphozi okuhlukaniswa kuwo wonke umhlaba. Umgomo wesinyathelo ukugqugquzela ukuqwashisa umphakathi nokugqugquzela imfundo yamanzi nge-online showcase yezindawo ezisemaphethelweni omhlaba ophezulu. Ekugcineni, noma ngubani ozokwazi ukukhetha indawo ekhethekile yokumanzisa ukuba ifakwe ohlelweni, nazo zonke izicelo ezizobuyekezwa futhi zifaneleke ngumbuyekezi we-SWS. I-SWS ihola lo mzamo futhi isungule uhlelo, kufaka phakathi iwebhusayithi kanye nedatha.
Lena ithuba elijabulisayo lokungena ezingeni eliphansi phansi nalesi sinyathelo esisha. Inqubo yokubuyekeza ihlehliswa ukwenza uhlelo lula. Ukuvakasha kwendawo akudingekile. Izicelo zizoqukatha ulwazi olwanele lokubukeza ideskithophu. Silindeleke ukuthi sibuyekeze zonke izinhlelo zokusebenza ngesikhathi esifanele. Sicela uxhumane nathi swswetlandsofdistinction@gmail.com uma unesithakazelo sokujoyina amaHlathi weThimba Lokubukeza Lokusebenza Lokuhlukanisa.
I-3. Xhumana nathi
swswetlandsofdistinction@gmail.com mayelana nezwe elinamanzi okumele libhekwe njengeNdawo Emanzi Yokuhlukanisa.